iOS 15 nanao veloma ny karatra fitsangatsanganana sy hetsika nitranga tao amin'ny Wallet | Vaovao IPhone
iOS 15 nanao veloma ny karatra fitsangatsanganana sy hetsika nitranga tao Wallet
Tamin'ny taonjato faha-XNUMX, manana ny carte de crédit, fiakarana, tapakilan-tsarimihetsika, tapakilan'ny kongresy, sns. lasa mahazatra io. Mba hanomezana toky ny filaminan'ny fampahalalana rehetra, Apple dia namorona ilay fampiharana Wallet taona maro lasa izay miaraka amin'ny tanjon'ny tahirizo ny karatra rehetra ary mandalo amin'ny toerana iray misy ifandraisany amin'ny mpampiasa. Fa toy ny fampiharana marobe amin'ny iOS, tsy novaina nandritra ny taona maro izy io. Saingy, tamin'ny fahatongavan'i iOS 15 Apple dia namaha ny iray amin'ireo olana lehibe nisy tamin'ity fampiharana ity: ny fampisehoana mialoha ny karatra hetsika taloha. iOS 15 dia mamela azy hanafina azy ho azy.
Hanafina ny dia lany daty sy fandefasana hetsika amin'ny iOS 15 i Wallet
Miaraka amin'ny Wallet dia azonao atao ny manana carte de crédit, debit ary prepaid, karatra maha-mpikambana sy tsy fivadihana, pass pass, tapakila, tapakila, carte d'exploitation sns ... amin'ny toerana iray ihany.
Ny kitapom-batsy dia mitahiry mitahiry pass pass, tapakila ary karazan-dàlana fidirana hafa. Na izany aza, maro amin'ireo karatra ireo tapitra izy ireo satria nitranga ny hetsika na satria efa nampiasainay izy ireo. Mba hahatonga azy ireo hanjavona amin'ny fampiharana dia ilaina ny mamafa azy ireo tsirairay ary indraindray dia asa mahasosotra tokoa izany.
Ny fahatongavan'i iOS 15 dia namarana ity olana ity tamin'ny fanampiana ilay safidy: 'Afeno ny karatra lany daty'. Izany hoe, amin'ny alàlan'ny fampandehanana ity safidy ity rehefa mitranga ny hetsika ary lany daty ireo karatra, dia tsy ho hita intsony eo amin'ny efijery Wallet lehibe izy ireo. Eny tokoa, tsy foanana maharitra izy ireo, avela any amin'ny habaky ny fampiharana ny taratasy lany daty rehetra mba hitazomana azy ireo ho fahatsiarovana.
Araka ny mpandraharaha, ny kaody iOS 15 dia manome fambara amin'ny safidy iray hafa na dia mbola tsy navotsotra aza izy io. Io safidy io dia mamela mamafa voa indray mandeha indray mandeha. Izany hoe, azontsika atao ny manafoana maharitra ny karatra maromaro fa tsy mandeha tsirairay toy ny ataontsika ankehitriny amin'ny iOS 14. Ho hitantsika raha ampidirina amin'ny kinova farany ireo fiasa ireo ary ny fiantraikany eo amin'ny fampiasana ny fampiharana amin'ny mpampiasa izay ampiasao isan'andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » iOS 15 nanao veloma ny karatra fitsangatsanganana sy hetsika nitranga tao Wallet
Apple Music sy ny fahamalinana manoloana ny fanovana ny royal royal
Xiaomi dia mahatratra an'i Apple ary lasa mpanamboatra smartphone faharoa